Omakhalekhukhwini bakaZuum bayakufanele | Kusuka kuLinux
I-Los Amafoni omakhalekhukhwini Akukaziwa kangako abaningi abazi ukuthi lezi zinhle ngempela noma cha futhi ngoba banenani eliphansi abaningi bacabanga ukuthi abalungile.
I-Los Amafoni omakhalekhukhwini Singazithola ezitolo zaseCoppel eMexico, lezi zinentengo eshibhile kunamaselula avela kweminye imikhiqizo enezici ezifanayo, lokhu kwenza abasebenzisi basheshe bacabange ukuthi akuzona ezisezingeni elifanele kanti empeleni zikhona.
UZuum, njenganoma iyiphi enye inkampani, unikeza omakhalekhukhwini bazo zonke izigaba, iningi lazo okungamaselula amahle impela, anezici ezinhle namanani entengo, lokhu kubenza babe ngomakhalekhukhwini abahamba phambili eMexico abanenani lentengo / ikhwalithi elingcono kakhulu.
I-Los Amafoni omakhalekhukhwini Njenganoma iyiphi enye, inezinzuzo nezinkinga zayo, izinzuzo ukuthi zingabizi kakhulu futhi zinezici ezinhle, okungahambi kahle ukuthi azinazo izesekeli ezitholakalayo futhi akunakwenzeka ukuthola izingxenye ezisele.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » eziningana » Amafoni omakhalekhukhwini ayifanele